Global Voices teny Malagasy · 3 Janoary 2018
03 Janoary 2018
Tantara tamin'ny 03 Janoary 2018
Skypecast Libanona #2: Bilaogera “Lebanon.Profile”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Janoary 2018
Rehefa nifampiresaka tamin'ny Skype tamin'i Gustave avy ao amin'ny Diarim-Politika Libaney aho dia niantso tamin'ny finday ao Beirota tamin'ny mpiaraka mibilaogy aminy izay fantatra amin'ny anaram-bilaogy hoe "Lebanon.Profile."
Azia Atsinanana03 Janoary 2018
Tsy nieritreritra mihitsy izahay fa hiteraka ireo ezaka-hanesorana ny mponina amin'ny faritra telo nandalovan'ny rivo-doza na nampihitsoka ny toe-karenan'ny faritany telo tany Visayas Atsinanana ny rivodoza.
Kambodza: Feo Avy Amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Kambodziana
Nandidy ny radio sy fahitalavitra rehetra mba tsy hamaky ny lahatsoratram-baovaon'ny gazety vita pirinty ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao. Heverina fa andrana hitazonana ny fanaovan-gazety matihanina ao amin'ny firenena ity hetsika ity.
Kazakhstan03 Janoary 2018
Bilaogera Kazakh maromaro no nizara ny fihetsem-pony momba ny renivohitra vaovao ao Kazakhstan antsoina hoe Astana.